Dowladda Soomaaliya Oo ka Hortimid Nidaamka Gaarka ah Ee Beesha Caalamka Deeqaha ku Siin-jirtay Somaliland | Awdalmedia.com
Dowladda Soomaaliya Oo ka Hortimid Nidaamka Gaarka ah Ee Beesha Caalamka Deeqaha ku Siin-jirtay Somaliland
Dowladda Soomaaliya ayaa markii ugu horaysa ka hortimid in la sii wado nidaamka gaarka ah ee Beesha Caalamka kula macaamili jirtay ama ay deeqaha ku siin jirtay Somaliland.
Nidaamkan oo loogu magac daray (Special Arrangement) ayaa la bilaabay sanadkii 2013, xilligaasoo lagu saxiixay shirkii New Deal-ka ee ka dhacay magaalada Brussels.
Wasiirka Qorsheynta iyo Xiriirka caalamiga Jamaal Xasan Maxamed ayaa qoraal ka soo baxay xafiiskiisa lagu sheegay in dowladda Federaalka aysan cusbooneysin karin nidaamka gaarka ah ee Beesha Caalamka ku taageeri jiray Somaliland.
Beesha Caalamka ayaa Dowladda Federaalka ah ka dalbatay dib u cusbooneysiinta nidaamka gaar ahaan qeybta quseeya Somaliland, kaasoo mashaariicda horumarineed ee beesha caalamka ka fulineyso Soomaalia qeyb gaara looga qoondeeyo Somaliland.
Qoraalka ayaa lagu sheegay in dowladda Federaalka ay soo dhoweyneyso hab kasta oo lagu garab istaagayo maamulada dalka ka jira, balse nidaamka gaarka ah uu keenayo in maamulo kale ay dalbadaan, isla markaana ay halis gelineyso Qaranimada.
Arrintan ayaa cirka ku sii shareereysa xiriirka cakiran ee dowladda Federaalka kala dhaxeeya Somaliland, isla markaana ay horseedi karto in Somaliland ay sii fogaato.